कैलालीका सबै उम्मेदवारको मुख्य मुद्दा प्रदेशको राजधानी « Anumodan National Daily
कैलालीका सबै उम्मेदवारको मुख्य मुद्दा प्रदेशको राजधानी
धनगढी । कैलालीमा चुनावी नजिक आउँदै गर्दा प्रदेशको राजधानी कहाँ बनाउने भन्ने वहस चुलिएको छ । बाम गठबन्धनका उम्मेदवारहरूले कैलालीमै प्रदेश नं. ७ को राजधानी हुनुपर्नेमा जोड दिए पनि नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवारहरू राजधानीका बनाउने विषयमा मौन छन् ।
बाम गठबन्धनका उम्मेदवारहरूले भौतिक संरचना, विकास र जनताहरूको अधिकारको सम्मानका लागि कैलालीको धनगढी वा अत्तरियामै राजधानी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रदेश सरकारलाई आवश्यक पर्ने भौतिक संरचना, सेवासुविधा र प्रदेशका सबै जिल्लाका जनतालाई पायक पर्ने गरी धनगढी वा अत्तरिया उपयुक्त रहेको ठम्याइ गठबन्धनको छ ।
नेकपा एमालेका जिल्ला अध्यक्ष तथा कैलाली प्रदेशसभा क्षेत्र नम्बर ४ को १ का उम्मेदवार दीर्घ सोडारीले पनि अत्तरिया नै प्रदेश राजधानी उपयुक्त हुने बताए । उनले आर्थिक, यातायात, भौतिक संरचना र अन्य सुविधाको हिसाबले कैलालीको धनगढी र अत्तरियामा प्रदेशको राजधानी बनाउँदा प्रदेश नं. ७ का सबै जनतालाई सुविधा हुने बताए । धनगढी र अत्तरियामा राजधानी बनाउँदा राज्यलाई समेत आर्थिक भार अन्य ठाउँ भन्दा धेरै कम पर्ने उनको दावी छ ।
नेकपा माओवादीका पोलिटब्युरो सदस्य वीरमान चौधरीले कैलालीको धनगढी वा अत्तरिया नै राजधानी हुँदा विकास गर्न राम्रो हुने बताए । पार्टीले निर्णय नगरिसकेको भएपनि पार्टीका धेरै नेता तथा कार्यकर्ता र जनताहरूको चाहना धनगढी वा अत्तरियामै राजधानी बनाउनेमा जोड रहेको उनले भनाई छ । चौधरी कैलाली क्षेत्र नम्बर ३ को १ बाट प्रदेशसभाका लागि उम्मेदवार हुन् ।
एमाले नेता डेजी पाण्डे थारू समुदायको अधिकारको रक्षाका र उनीहरूको सम्मानका लागि पनि धनगढी वा अत्तरिया नै प्रदेशको राजधानी लागि उपयुक्त रहेको बताउँछन् । हिजो थारूहरूले डोटी राजधानी बनाउँदा गाह्रो हुन्छ, त्यसैले थारूहरू बाहुल क्षेत्रको अलग्गै प्रदेश बनाउनुपर्छ भने तर अलग्गै प्रदेश भएन त्यसैले कैलाली, कञ्चनपुरका ४२ प्रतिशत थारूको मागको सम्मान गर्दै भएपनि अत्तरिया वा धनगढी राजधानी बनाउनुपर्छ भन्ने मत धेरैको पाइन्छ ।
नेकपा माओवादीका स्थायी समिति सदस्य तथा प्रदेश नं. ७ ईञ्चार्ज लेखराज भट्टले पार्टीले आधिकारिक निर्णय नगरिसकेको बताए । कैलाली क्षेत्र नं. ४ बाट प्रतिनिधिसभाका लागि बामगठबन्धनका उम्मेदवार रहेका नेता भट्टले माओवादीले पार्टीले सबै जनतालाई पायक पर्ने र राज्यलाई भौतिक संरचना निर्माणमा भार नपर्ने गरी निर्णय लिइने बताए ।
नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा कैलाली क्षेत्र नं. ५ मा प्रतिनिधिसभाका बाम गठबन्धनका उम्मेदवार नारदमुनी रानाले प्रदेशसभालाई आवश्यक भौतिक संरचना रहेकोले र थारू समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न धनगढी वा अत्तरियामै प्रदेशको राजधानी बनाउनुपर्ने बताए । ‘थारू समुदायको मागअनुसार उनीहरूलाई थरुहट प्रदेश दिन सकिन । अब राजधानी पनि माथि नै बनाउने हो भने उनीहरूको अधिकार कुन्ठित हुनेछ, उनीहरूको अधिकार रक्षाका लागि धनगढी वा अत्तरियामै राजधानी बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
कैलाली क्षेत्र नम्बर ५ को २ का बाम उम्मेदवार रमेश धामीले पनि कैलालीको धनगढी नै प्रदेश राजधानी उपयुक्त रहेको बताउँछन् । उनले प्रदेशलाई आवश्यक भौतिक संरचना लगायत सबै सुविधाहरू धनगढीमै तयार रहेकोले धनगढी उपयुक्त हुने बताए । उनले धनगढीमा राजधानी भए प्रदेशका नौं वटै जिल्लाका जनतालाई सहज हुने उल्लेख गरे । थारू समुदायको अधिकार सुरक्षित गर्न पनि धनगढीमै राजधानी बनाउनुपर्नेमा धामीको जोड छ ।
नेपाली काँग्रेसका कैलाली प्रदेशसभा क्षेत्र नम्बर १ को २ का उम्मेदवार डा. रणबहादुर रावलले कैलालीमै राजधानी हुनुपर्ने आसय व्यक्त गरे । उनले तोकेरै नभने पनि नौ जिल्लाकै जनतालाई यातायता, आर्थिक, भौतिक सहुलियत हुने गरी प्रदेशको राजधानी बनाउनुपर्ने बताए । उनले यो निर्णय गर्ने जिम्मेवारी प्रदेशसभाको भएकाले प्रदेशसभाको बैठकले टुंगो लगाउन जिकिर गरे ।
कैलालीका जनताहरूले समेत प्रदेशको राजधानी पहाडी जिल्लामा प्रदेश नं. ७ का जनताले राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा सहज तरिकाले पाउन नसक्ने बताएका छन् । धनगढीका श्यामराज भट्टले लोकसेवाको परीक्षा दिन जाँदा समेत दिपायलमा बास बस्नका लागि लजहरू अभाव हुने गरेको बताए । उनले दिपायलमा राजधानी बनेमा सरकारी कामकाजका लागि जाने नागरिकहरू बस्न र खानका लागि ठाउँ नै नपाउने सम्भावन रहने बताए । उनले अन्य सेवा सुविधाहरू जनताहरूलाई दिन राज्यलाई धेरै आर्थिक भार झेल्नु पर्ने भएकाले धनगढीमै प्रदेशको राजधानी बनाउन राजनीतिक दलहरूलाई सुझाव दिए ।
भारतसँग सीमा जोडिएको धनगढी विमानस्थाल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बन्ने सम्भावना भएको र नेपाली सेना, शसस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका उच्च स्तरका यूनिट रहेकोले धनगढी वा अत्तरिया राजधानी हुनुपर्ने जिकिर धेरैको छ । निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ प्रदेशसभा २ का बाम गठबन्धनका उम्मेदवार कृष्णराज सुवेदी जनसंख्याका हिसावले पनि कैलाली, कञ्चनपुर पहाडका अरू जिल्ला बराबर भएकोले प्रदेशको राजधानी अत्तरिया वा धनगढीमै हुनु न्यायोचित हुने बताए ।